थ्री स्टारको यात्रामा आर्मी बाधक- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
पुस २८, २०७४ भीमबहादुर सिंह
जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले पनि विशेषज्ञ चिकित्सक र औषधि अभावका कारण रोग नियन्त्रणमा समस्या भएको बताए । प्रकोप फैलिएको ३ साता बित्दा पनि रोग नियन्त्रणमा नआउनु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सम्बन्धित निकायले लापरबाही गरेको आरोप लगाए । चिसो बढ्दै जाँदा र भाइरलका बिरामी पनि बढ्न थालेपछि प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको उनले बताए ।
अब ३/४ दिनमै भाइरल नियन्त्रणमा आउने पनि जनस्वास्थ्य प्रमुख नेपालीले बताए ।
किन सधैं जाजरकोटमै?
यसपालि पुस पहिलो सातादेखि जुनीचाँदे गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिएको छ । आखिर किन पटकपटकरोगव्याधिको प्रकोप फैलन्छ यहाँ? विज्ञ भन्छन्– चेतनाको कमी छ। दूषित पानीको प्रयोग हुन्छ। सरसफाइ बिल्कुलै छैन। पौष्टिक खाना अभाव छ। यी सबै कारणले पटकपटक महामारी फैलिने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपालीले बताए ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:३३